Vaovao Mafana · Mey, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Mey, 2012
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Mey, 2012
Kenya: #NairobiBlast Tenifototra Nalaza Tao Amin'ny Twitter Nandritra ny Fipoahana Tao Nairobi
Afrika Mainty 31 Mey 2012
Fipoahana mahery vaika no nitranga tao amin'ny arabe lehibe iray tao Nairobi, Làlana Moi, ao an-drenivohitra Kenya tamin'ny Alatsinainy atoandro. Nilaza ny fanadihadiana teny amboalohany fa noho ny olana teo amin'ny herinaratra no nahatonga ny loza. Nolavin'ny lehiben'ny polisy ny tsaho milaza fa fampihorohoroana fanapoahana baomba avy amin'ny Al-Shabaab ny loza....
Meksika: Fanamelohana Ny Famonoan'olona Tao Cadereyta, Ao Nuevo León
Amerika Latina 18 Mey 2012
Maneho ny heviny ny mpiserasera manoloana ireo faty olona miisa 49 norasarasaina tao Cadereyta, Nuevo León, akaikin'ny sisintanin'i Etazonia.
Korea Atsimo: Moines Tratra Niloka, Nigoka Ary Nifoka
Azia Atsinanana 17 Mey 2012
Tao Korea Atsimo, mpitarika enina avy amin0ny holafitry ny Bodista goavana indrindra ao amin'ny firenena no tratra nilalao Poker niaraka taminà tontona avo dia avo, no sady nisotro sy nifoka ihany koa. Ilay tranga dia niparitaka tamin'ny alàlan'ny lahatsary iray nivoaka an-tsokosoko, nampiseho ireto 'moines' mitana toerana ambony ireto niloka tao aminà hotely mihaja lehibe iray manamorona ny renirano, andro vitsy monja nialoha ny fety fankalazan'ny iray firenena ny nahaterahan'i Buddha.
Norvezy: Ireo Resaka Momba An'i Amerika Latina Ao Amin'ny Oslo Freedom Forum
Amerika Latina 16 Mey 2012
Ny herinandro lasa teo no notontosain'ny Human Right Foundation tao an-drenivohitra norveziana ny Oslo Freedom Forum. Ny teny filamatra “Avy amin'ny aizina mankamin'ny mazava,” avondron'ny forum ny endrika fanta-daza manerantany hiresaka ny krizy mahaolona sy hifanakalo hevitra momba ny fiantraikany. Iray amin'ny nandray anjara fitenenana mandritra ny fotoana mitondra ny lohahevitra...
Madagasikara: Nogidrahan'ny Tafika Ny Mpampianatra Mitokona
Afrika Mainty 10 Mey 2012
Nitokona nandritra ny herinandro noho ny tsy fitoviam-pijery eo amin'ny vola raisin-dry zareo isam-bolana ny sendikàn'ny mpampianatra. Noteriterena tamin'ny alalan'ny fandefasan'ny tafika mitam-piadiana baomba mandatsa-dranomaso [fr] ny hetsi-panoherana. Niditra tao anatin'ny hetsi-panoherana ihany koa [mg] ny mpianatra (via bolonga-tsarin'i Jentilisa).
Azia Atsimo 07 Mey 2012
Frantsa : Fihetseham-po An-tsary ny Valim-Pifidianana Filoham-Pirenena
Afrika Mainty 06 Mey 2012
Nivoaka ny valim-pifidianana ny filoham-pirenena frantsay 2012, ny fahafolo nandritra ny Repoblika fahadimy ny 6 mey 2012. Tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany 22 avrily, nitarika i François Hollande ka teo alohan'i Nicolas Sarkozy tamin'ny ampaham-bato 28,63 % sy 27,18 % tamin'ny vato manankery. Tamin'ny fiodianana faharoa kosa, François Hollande nahazo ny...